President of Myanmar has appointed U Tha Aung Nyun, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to New Zealand – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
President of Myanmar has appointed U Tha Aung Nyun, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to New Zealand
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Commonwealth of Australia, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to New Zealand.
Dated. 14 December 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်အား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်